Madaxweynaha Puntland oo qabtay kulan deg deg ah kadib weerarkii ay Al-Shabaab ku qaadeen saldhig ciidan oo kuyaala gudaha Buuraha Galgala - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweynaha Puntland oo qabtay kulan deg deg ah kadib weerarkii ay Al-Shabaab ku qaadeen saldhig ciidan oo kuyaala gudaha Buuraha Galgala
Madaxweynaha Puntland oo qabtay kulan deg deg ah kadib weerarkii ay Al-Shabaab ku qaadeen saldhig ciidan oo kuyaala gudaha Buuraha Galgala. [Sawirka: Archive]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa kulan deg deg ah ku qabtay xarunta madaxtooyada kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ciidan oo kuyaala Buuraha Galgala subaxnimadii hore maanta oo Khamiis ah.
Sida ay ilo-wareedyadu sheegeen, Ugu yaraan 25 askari oo ciidamada Puntland katirsan ayaa lagu dilay weerarka kaas oo lala bartilmaameedsaday saldhiga Af-urur oo kuyaala Buuraha Galgala,waxaana uu ahaa weerarkii ugu dhimashada badnaa oo hal maalin soo gaara ciidamada Puntland tan iyo markii uu bilaabmay dagaalka u dhaxeeya ciidamada Puntland iyo maleeshiyada Al-Shabaab sanadkii 2010-ka.
Garoowe-(Puntland Mirror) Xubno katirsan golaha wasiiradda ayaa maanta oo Isniin ah xafiiska loo dhaarshay. Dhaarinta ayaa ka dhacday xarunta madaxtooyada, halkaas oo uu goobjoog ka ahaa madaxweynaha Dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni. Xubnaha, oo ay [...]